Wiricheya Vhura Bhokisi Specials - Wiricheya Akashandiswa Kutengesa
kuratidzira Mawiricheya For Sale
Iri peji rinopa rondedzero yezvigadzirwa zviri demo kana ekudzosa zvikamu. Vanogona kuratidza zvimwe zviratidzo zvekupfeka, kukwenya, nezvimwewo padyo padhuze nemamiriro uye mukushanda kwakanaka.
Unogona kundibhadharira Medicare kwandiri?
Hatikwanise kubhadharisa Medicare yeOpen-Bhokisi zvigadzirwa.
Ko kana chimwe chinhu chikatadza kuenda nekutenga kwangu?
Vhura-Bhokisi zvinhu zvinotengeswa se-zviripo uye hazvidzoreke
Ko kana ndichida kudzosera zvandatenga?
Vhura-Bhokisi zvinhu zvinotengeswa se-zviripo uye hazvidzoreke.
* Isu hatisi ivo vanoita chero kukuvara panguva yekutakura kana chero imwe mamiriro ezvinhu apo chigadzirwa chakakuvadzwa. Aya mamodheru anotengeswa se-is uye iwo haadzosere pasi pechero mamiriro ezvinhu anogona.